Covid-19 – Page 10 – Shwe Sar
“ကိုဗစ် ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်သူ အရေအတွက် များပြားလာသည့် ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ ကိုဗစ် ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေ” (ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး)
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်သူများကို အတော်အသင့် တွေ့ ရှိနေရပြီး ပြင်းထန်သူအရေ အတွက် မျာြး ပားလျက်ရှိ၍ ပြည် သူလူထုအနေ ဖြင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် အေ ရးကြီးနေကြောင်း ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ပါမောက္ခချုပ် […]
(၁) Covid-19 designated Hospital များ အဖြစ် ဝေ ဘာဂီ၊ တောင် ဥက္ကလာ၊ ဖောင်ကြီး ၃ ခုတည်း ရှိနေရာမှ လူနာအင်အား ဆတိုးများပြားလာသည့်အခါ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ အခြားေ ဆးရုံအ သီးသီးကိုလည်း […]
ဒီလို အဖြစ်မျိုး နဲ့ ကြုံတွေ့ ရသူပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ မသိပါ (တကယ် ခံစားရပါတယ်)
ကဲနောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။ အားလုံးသတိရှိကြပါ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံတွေရသူပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲမသိပါ.. တကယ်ခံစားရပါတယ် Covid က တကယ်ကြောက်ဖို့ေ ကာင်းတာ ပါ… အားလုံး ဝိုင်းစိတ်ပူပေးကြလို့ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်…. ပထမဆုံး ကျမပါပါး မဆုံးခင် သုံးရက်ကအကြောင်းကို စပြောပါ့မယ် […]
(၅) ယောက် စစ်ရင် (၁)ယောက်တွေ့နှုန်း အထိ တက်လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ နဲ့ ပြန်သုံးသပ်ရမယ့် ဗျူဟာများ
ထိန်းနိုင်ပါ တယ် ဆိုပြီး ၅ ယောက်စစ် ၁ ယောက်တွေ့ နှုန်းအထိ တက်လာတဲ့ ရန်ကုန် ဗျုဟာတွေ သေချာပြန်သုံးသပ်ရတော့မယ် (အမှန်တော့ပြောခဲ့တာကြာပြီ) နယ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အစပိုင်း အဆင်ပြေသလိုလို နဲ့ နောက်ပိုင်းရန်ကုန်လိုဖြစ်လာမယ် မြေကြီးလက်နဲ့ […]
ပြည်သူ တွေ မပေါ့ကျ ပါနဲ့ ဆရာဝန်တွေ စိုးရိမ်နေကြ တဲ့ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုလှိုင်းတွေ နယ်တွေမှာ စပြီ
မော်လမြိုင်….စပြီ နော် မနေ့ညက… Contact လေးရာ နဲ့ ဆေးရုံ ကြီး ကုတင်အပြည့် တစ်ရက်တည်း Positive ရာနားကပ်တယ်…. မဲဆွယ်ပွဲ လည်း…လုပ်ထားတော့…. အခြေအနေ တော့ သိပ်မလှဘူး ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တဲ့ နယ် […]
ကိုဗစ်ကို ပေါ့ဆမိ လို့ လူနာတင်ကားပေါ် မှာတင် အသက်ဆုံး ခဲ့ရ တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ် သူ အကြောင်း ပြောပြ တဲ့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး
ကိုဗစ် နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီရက်ပိုင်း စိတ်တွေမလန်းဘူး စိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းမိတာက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မူလတန်းကတည်းက ငယ်သူငယ်ချင်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းတွေပိတ်တုန်းလဲ သင် တ န်းမျိုးစုံအတူတူတက်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်း ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးရတယ် ဘာလို့လဲ အိမ်မှာသူ့အဖေကစဖျားတယ် ချောင်းဆိုးတယ် ညီမလုပ်သူက […]
ကိုဗစ် အတွက် ကျပ် (၉) ဘီလီယံကျော် အထိ လှူဒါန်းထားတဲ့ ဦးဇော်ဇော်
ကိုဗစ်ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျပ် ၉ ဘီလီယံလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်က “ဧရာဝတီဖောင်ေ ဒးရှ င်း အနေနဲ့ ကိုဗစ် ပထမလှိုင်းမှာ (၃.၅)ဘီလီယံနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းအတွက် (၅.၅)ဘီလီယံ စုစုပေါင်း (၉)ဘီလီယံလှူဒါန်းခဲ့ပြီး […]
မြန်မာပြည် အတွက် ဦးဇော်ဇော် အသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပါတယ်
ဧရာဝတီေ ဖာင်ဒေးရှင်းကတော့ ကိုဗစ်-၁၉ အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနဦးဆောင်မှုနှင့် ကုတင်(၁၀၀၀) နှင့် Test and Care ဧရာဝ တီစင် တာကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၇၀၀)ကျော်ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နော်။ကိုဗစ်-၁၉ […]
ဆရာကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်သိန်းဌေး ဟာ ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ရန်ကုန်က ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အင်းယားစင်တာရဲ့ ဒုဦးစီးအုပ်ချုပ်သူ အဖြစ် ဦးဆော င် ကာ အတည်ပြုလူနာများကို ကုသပေးနေသော ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီး […]
ကောင်မလေး တယောက်ကြောင့် ကောင်လေး (၅) ယောက် Q ဝင် သွားရခြင်း ကြံကြံ ဖန်ဖန် ဖြစ်တတ်တယ်
ကောင်မလေး က မြစ်ကြီးနား ကို လာတယ်။ မြစ်ကြီးနား က ဘဲ ၅ ယောက် ကို လိုင်းပေါ် ကနေ အီထားတယ် ပြီး မြစ်ကြီးနားဘူတာကို လာကြိုခိုင်းတယ် တစ်ယောက် မချိတ်မိတစ်ယောက်ပေါ့ ဟိုက […]